အာဖရိကနှင့်ပြင်ပလူသစ် - Afrikhepri Fondation
စနေနေ့, ဇူလိုင် 31, 2021
A Mayans, Hopis နှင့်အခြားဌာနေတိုင်းရင်းသားများကဲ့သို့ပင်အာဖရိကတိုက်ရှိလူများသည် Extraterrestrials အကြောင်းလည်းပြောဆိုကြသည်။ မာလီ၏အယူဝါဒများကသူတို့ကို“ Nommos”၊ Kongos၊ “ Bana Ba Zulu” (Cf. Bana ဘဇူ: ကောင်းကင်ဘုံ၏သား) " ကျွန်ုပ်တို့အာဖရိကသားများသတိထားမိသောဂြိုလ်သား ၂၄ ခုကျော်ရှိသည်။ " Vusamazulu Credo Mutwa ဒီဂြိုဟ်သားမဟုတ်သူများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်သို့မည်သည့်နေရာသို့ရောက်ရှိလာကြသနည်း။ သုတေသီများက Orion နှင့် Sirius အကြောင်းပြောဆိုကြသည်။ ဤသည် Orion နှင့် Sirius များအတွက်ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုများ၏စွဲရှင်းပြလိမ့်မယ် !!
ဇူလူရိုးရာကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်သူ Vusamazulu Credo Mutwa အတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏“ Space Brothers” သည်ကမ္ဘာသို့လည်ပတ်ခဲ့ခြင်း၊ ကမ္ဘာကိုအလည်အပတ်ခရီးကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအာဖရိကတိုက်ရှိလူအများသိကြသည်။
» Zulus, Dogons နှင့်အခြားအာဖရိကလူမျိုးစုများအကြား Nommos အကြောင်းဇာတ်လမ်းများရှိသည်။ သူတို့ဟာကမ္ဘာကိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာလာခဲ့ကြတဲ့အသိဉာဏ်ရှိသတ္တဝါများလို့ပြောကြတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အသားအရေကိုမှလွဲပြီးလူသားတွေလိုပဲ။ ။ » Vusamazulu Credo Mutwa in ကြယ်၏သီချင်းများ, 36 စာမျက်နှာ။
၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာအာဖရိကပညာရှင် Youssouf Tata Cisséကတည်ခင်း Bamb ည့်ခံသော Bambara စကြာဝonာဆိုင်ရာညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့တယ်။ ကွန်ဖရင့်အပြီးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပါမောက္ခထံချဉ်းကပ်ပြီးသူ့ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်အောက်ပါမေးခွန်းကိုမေးခဲ့သည်။
- " Nommos Dogon အစဉ်အလာဖော်ပြခဲ့တဲ့ထားတဲ့ PR? " သူ့အဖြေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့တိတိကျကျမှတ်မိလို့ကျွန်တော်အမြဲမှတ်မိနေလိမ့်မယ်။
ဥပစာစကားသို့မဟုတ်ဥပစာစကားမဟုတ်ဘဲရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူ၏အဖြေသည်အပြင်ဘက်ပြင်ပလူတန်းစားများစွာသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးနေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူနေထိုင်နေသော Vusamazulu Credo Mutwa ၏အတည်ပြုချက်ကိုအတည်ပြုသည်။
ယူစွတ်ဖ်တာတာစီစီ၏အဖြေကအာဖရိကန်ဓလေ့ထုံးတမ်းကိုအတွင်းမှသိသူအခြားစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သောအာမဒူအမ်ပါတီဗာထံမှငါ့ကိုသဘောပေါက်စေခဲ့သည်။ သူ့အလုပ်မှာ " အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု၏ပုံပန်းသဏ္ဍာန် " (စာမျက်နှာ 135), Tierno Bokar ၏မာလီစာရေးဆရာ Amadou ဘ Empate တပည့်, ဘန်ဒီရာဂါပညာရှိသောသူသည် wrote:
« အဆိုပါ Milky Way ကိုသူကသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြရသည်အခါ, Masa-Dembali ချေးအကြီးဆုံး illuminated လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ လူသား၏ဘိုးဘေးတို့ဟာသူတို့ရဲ့ Demeur ရှိe ။ ထို့ကြောင့်လူသားများ၏ဘိုးဘေးများသည်နဂါးငွေ့တန်းမှလာသည်၊ တစ်နည်းပြောရလျှင်ကမ္ဘာမြေပြင်ပမှဖြစ်သည်။
Vusamazulu Credo Mutwa, Youssouf Tata Cisse နှင့်ဘ Amadou Empate ဒီခေါင်းစဉ်ကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းတည်းသောအာဖရိကန် Initiative မရှိကြပေ။
Kongo တွင် Ne Muanda Nsemi, Bundu Dia Kongo လှုပ်ရှားမှု၏ ၀ ိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်လည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အီဂျစ် - နူဘီးယန်နှင့်ဆူမားရီးယန်းယဉ်ကျေးမှု၏မူလအစဖြစ်သောအနက်ရောင်ပြင်ပလူတန်းစားမျိုးဟုသူသင်ကြားသည်။ မြေကြီးတပြင်ကောင်းကင်မှလာသော Annunaki,).
အာဖရိကန် Initiates များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သို့လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသော / သို့မဟုတ်ကမ္ဘာမြေပြင်ပရှိယဉ်ကျေးမှုများအကြောင်းကိုများစွာသိရှိကြောင်းကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာဖရိကပညာက " ဗဟုသုတကိုတောင်းခံသူများကိုသာပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့်အာဖရိကန်များသည်ဤအကြောင်းအရာကိုစိတ်မ ၀ င်စားပါက Initiates သည်၎င်းအကြောင်းကိုမပြောတတ်ပါ။
လူသား၏သမိုင်းသည်အချို့သောသိပ္ပံပညာစိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကားများထက် ပို၍ ပင်“ phew” ဖြစ်သည်။
« အာဖရိကသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနားလည်ရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သော်လည်းသုတေသီများကမူယင်းကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ "ဒါဝိဒျ Icke
တရားဝင်ပုံပြင်၊ လိမ်ခြင်း၊ လျှို့ဝှက်ပုံပြင်၊ ဖြစ်ရပ်များ၏အဓိကအကြောင်းရင်းများမှာဇာတ်လမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ဂုဏ်အသရေက de Balzac
သင်တို့ကဲ့သို့နိုင်ငံရေးသမားများရှိသည့်အခါ ရှင်ပေါလု Hellyer, ကနေဒါဟောင်းဝန်ကြီးရုရှားသမ္မတဟောင်း Dmitriv Medved၊ ပြင်ပယဉ်ကျေးမှုများရှိသည်ဟုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောဆိုသောထင်ရှားသောသိပ္ပံပညာရှင်များသည်အာဖရိကနှင့် Native American Initiates တို့၏ကြေညာချက်များကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့ဖြစ်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိမ်ညာခံထားရပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်လက်လိမ်ညာနေကြောင်းထင်ရှားနေသည်။ အဘယ်ကြောင့် ?
« (…) ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာကျွန်ုပ်နှင့်သာသက်ဆိုင်သည့်ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာအောက်ပါဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အာကာသအတွင်းအရပ်ဘက်နှင့်စစ်တပ်အာဏာပိုင်များ၏ထိန်းချုပ်မှုမှလွတ်မြောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ထက်ကျော်လွန်သောနည်းပညာများကိုအသုံးပြုသောအရာဝတ္ထုများရှိသည်။ » Jean Jacques Velasco, အမျိုးသားအာကာသလေ့လာရေးစင်တာမှအဖွဲ့ဝင် (CNES)
- " သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာကိုပြောဖို့ဖိအားပေးခံရတယ်ဆိုတာခံစားရတယ်။ […] ကမ္ဘာကိုအသိဉာဏ်ရှိသောဂြိုလ်သားများလာရောက်လည်ပတ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ အချို့သော UFO များသည်ဂြိုလ်သားများဖြစ်ကြသည်။ MUFON အတွက်နျူကလီးယားရူပဗေဒအတိုင်ပင်ခံ Stanton T. Friedman
- " ပျံပန်းကန်ပြားပျံအခြားကမ္ဘာမှလာကြ၏။ "Hidoo Itokawa, ဂျပန်သိပ္ပံပညာရှင်
- " ဟုတ်ပါတယ်, UFOs အမှန်တကယ်လူများစွာယုံကြည်အဖြစ်ဂြိုလ်သားဆံ့, နှင့်အစိုးရ၏ cache တာဖြစ်နိုင်တယ်။ "ဒီနာမည်ကြီးရူပဗေဒပညာရှင်စတီဖင်ဟော့ကင်း
- " UFO များကိုအမြင့်ဆုံးသောဥာဏ်ရည်ရှိသတ္တဝါများဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။ […] ဤအရာဝတ္ထုများသည်ဂြိုဟ်များအနက်အချို့သောအရာများဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိပါ။ နှစ်ပေါင်းထောင်ပေါင်းများစွာ၏သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပြီ " ဒေါက်တာ Hermann Oberth
သုတေသနပြုပြီးနောက်လူတိုင်းသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်ကိုဖော်ထုတ်နိုင်ပါစေ။ ကျွန်တော်စကြဝuniverseာထဲမှာတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး၊ ထို့အပြင်ငါလူသား၏သမိုင်း, "လူမည်း၏အဖြစ်ဆိုး" ကိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်ကိုငါသံသယအဆိုပါပြင်ပမှများ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲ။
Vusamazulu Credo Mutwa ၏အဆိုအရ၎င်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးအရကျွန်ဖြစ်စေခြင်း၏မူလအစဖြစ်ပြီးလူမည်း၊
သံသယဝင်သူများ၏ပြောဆိုချက်များသည်အရေးမကြီးပါ။ သို့သော်အာဖရိကကိုဖျက်ဆီးနေသောအင်အားတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည် IMF ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များနှင့်အခြားကြီးမားသောဘဏ်များဖြစ်သည်ဟူသောအဓိပ္ပာယ်ကိုဝယ်ယူတော့မည်မဟုတ်။ ရွှေကြက်ဥဖြူကိုသင်မသတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များသည်အာဖရိကကိုအဘယ်ကြောင့်ဖျက်ဆီးလိုကြသနည်း။ ဤလူမျိုးနောက်ကွယ်ရှိအခြားအင်အားတစ်ခု၊ ကမ္ဘာမြေနှင့်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ဖွယ်ကောင်းသောအင်အားတစ်ခုရှိသည်။ နောက်ကွယ်မှအရာများကိုလုပ်ဆောင်နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့အတွင်းပိုင်းရှိသူများထက်အခြားအင်အားစုများကိုအပြစ်တင်ရန်အခက်အခဲရှိသည့်လူသားများအတွက်အလွန်အသုံးများသည်။ ဒါပေမဲ့၊ ငါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကတည်းကအရင်ကနဲ့အာဖရိကမှာအခြေအနေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးအာဖရိကမှာဂြိုလ်သားအင်အားအလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြတဲ့အထောက်အထားတွေရှိတယ်။ "
“ အမှန်တရားဟာဘယ်သူ့ကိုမှမပိုင်ဘူး။ သင်၏အမှန်တရားနှင့်သမ္မာတရားသည်အမှန်တရား၏အစိတ်အပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်»
Tierno Bokar, Amadou EmpatéBâ၏ဝိညာဉ်ရေးရာသခင်
ရှေးဟောင်း Giants - သမိုင်း၊ ဒဏ္Myာရီနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားများကမ္ဘာတဝှမ်းမှ
€5ကနေ 8,69 အသစ်
€ 12,55 ကိုဝယ်ပါ
နောက်ဆုံးဇူလိုင်လ 31, 2021 10:19 pm တွင် updated
မှော်အတတ်နှင့်ပတ်သက်သောအခြေခံစာချုပ် - ပါပူ (PDF)
လူ့စီးဆင်းမှု - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၇)
Permaculture ၏နိုးထခြင်း - မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် (၂၀၁၇)